के हुँदैछ नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लंघनको संघारमा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएको चार साता पूरा भएको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश न्याय परिषद्को पत्रअनुसार भएको मान्ने हो भने पद रिक्त भएको २९ दिन र राजीनामालाई मान्यता दिने हो भने २८ दिन भएको छ ।
पराजुलीको अवकाश न्याय परिषद्को पत्र वा राजीनामा जसरी भएको मानिए पनि संविधानको व्यवस्था पालना गर्ने हो भने चैत मसान्तसम्ममा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्नेछ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाई गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्दा बाँकी २ दिनमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।
एकमहिनामा नियुक्त नभए के हुन्छ ?
संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएको एक महिनामा नियुक्ति नभए के हुन्छ ? संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार संविधानले तोकेको अवधिमा नियुक्ति नभए संविधान उल्लंघन भएको ठहरिनेछ । यसो भए सरकारले नै संविधान पालनामा ध्यान नदिएको ठहर हुनेछ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने भएकाले संविधान उल्लंघनमा प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार ठहरिनेछन् । संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नहुनले दुईवटा प्रभाव पार्नेछ– एक, रिक्त भएको एक महिनाभित्र नियुक्त भइसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन हुनेछ । यसले सरकार नै संविधानका प्रवधान पालना गर्न गम्भीर छैन भन्ने सन्देश जानेछ । संविधान कार्यान्वयनका प्रारम्भिक दिनहरुमै यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संविधानको अपमान गर्दछ । दुई, न्यायालय कायम मुकायम नेतृत्वमा चल्नुपर्दा प्रभावकारितामा ह्रास आउन सक्छ ।
किन अलमलिए प्रधानमन्त्री ?
२०७४ चैत २८ बुधबार १३:५०:०० मा प्रकाशित